Ny rig XX450Plus mitsivalana amin'ny famaritana dia manana savaivony mamelombelona indrindra 1000mm, hery manosika fatratra 960kN, tselatra 23500N · m, ary milina 20t milanja milanja.
XZ450Plus HDD rig dia tafiditra ao anaty entana namboarina natao tamin'ny tadivavarana mihidy sy ny rafitra hydraulic, ny rafitra fanaraha-maso ny enta-mavesatra. Ny singa lehibe amin'ny rafitra hydraulic, ny rafitra elektrika ary ny rafitra fampitana dia marika an-trano sy iraisampirenena avo lenta, ary azo itokisana.
Endri-javatra fampidirana XZ450Plus HDD
1. manangom-bokatra mihodina angovo mihidy, fanaraha-maso mavesatra, fifehezana elektro-hydraulic ary teknolojia fanaraha-maso mandroso hafa, singa nafarana, kalitao azo antoka;
2. kitapom-batana manosika hisintona mba hiantohana ny fahamarinan-toerana amin'ny lohan'ny lohan'ny herinaratra sy ny fahamendrehana amin'ny fifindrana. Ny lohan'ny loha mitsingevana dia afaka miaro be ny kofehy fantsona ary manatsara ny androm-piainan'ny fantsona fandavahana;
3. singa lehibe indrindra mifantina mpamokatra singa iraisam-pirenena sy an-trano kilasy mpamokatra, manatsara ny fahamendrehan'ny vokatra;
4. ny fisafidianana lohan-kery fampitomboana herinaratra, herin'ny tarika herinaratra indroa hihaona amin'ny filan'ny mpanjifa manokana;
5. ny console dia natao tamin'ny ergonomia, izay ahazoana aina kokoa sy mety kokoa;
6. fifehezana tsipika mba hiantohana ny fiarovana ny fizotran'ny mandeha.
7. ny milina dia afaka mihaona amin'ny fitaterana kaontenera (tsy mandeha ho azy tanteraka).
QSC8.3-C260Engine Sina Ⅲ
Crane Loader 2 taonina
Crane Loader 3 taonina
Rafitra fotaka Paompy 600L / min
Paompy fotaka 450L / min
Fanadiovana ny fotaka
Pipeloader Pipeloader semi-mandeha ho azy
Pipeloader mandeha ho azy (Mila safidy Loader Crane 3t ilaina)
Cab sy AC
Trano masinina tsotra
Fitsipika an-tongotra Mandehandeha fehezin'ny tariby
Hery XZ450XZ450Plus Tariho farafahakeliny Max. Hery hisintona kN 960
Fanairana fanairana herinaratra Fiarovana ny hatairana elektrika
Paompy mihodina, manosika / manintona Danfoss
Torolalana / Valinteny misintona Danfoss
Motor amin'ny fihodinan'ny kalesy Liyuan / Huade
Fanosehana ny fiara / hisintona môtô Liyuan / Huade
Mpanafaka hafainganam-pandeha Bonfiglioli / Brevini / XCMG
Silinder Hydraulika XCMG
Tube Tube Hydraulika XCMG
vanobe koa samy XCMG
Mandeha moto / Reducer hafainganana Eaton
Antontan-taratasy ara-teknika mifatotra
Ny lisitry ny fonosana dia omena XZ450Plus HDD, izay misy antontan-taratasy teknika momba ireto:
Taratasy fanamarihana / torolàlana momba ny torolàlana / torolàlana momba ny fiasa sy fikojakojana ny motera / Boky fiantohana kalitao momba ny motera / fiasan-dàlana sy fikojakojana boky torolàlana momba ny Loader Crane / Manual Pump Pump
Teo aloha: RIG fandavahana atsivalana XZ420E
Manaraka: Fandrefesana fandefasana torolàlana XZ680A
milina fandavahana borewell
Milina fandavahana finday
hdd rig, milina fandavahana hdd, milina fandavahana lavaka, Rig ary atsofohy amin'ny familiana,